Fada ekeresimesi ka icho mma osisi ekeresimesi gi site na mmiri foam | Crafts Na
Fada ekeresimesi ka icho mma gị na osisi Christmas na eva roba
Egwu Donlu | | Ihe eji eme ekeresimesi, Ọrụ ụlọ
Santa claus ma ọ bụ santa claus Ọ bụ otu n'ime ndị amara amara amara ekeresimesi. Ọ na-ewetara anyị onyinye na Disemba 24 ma dị mma maka ụmụaka. Na nke a, m ga-akụziri gị otu esi eme nke a ihe ịchọ mma ke udi Santa Claus ka icho mma gị na osisi.
1 Akụrụngwa iji mee Santa Claus ịchọ mma
2 Usoro maka ịme Santa Claus ịchọ mma
Akụrụngwa iji mee Santa Claus ịchọ mma
Acha eva roba
Ihe nrịba ama na-adịgide adịgide
Igha ma ọ bụ eyeshadow
Owu ogwu na skewer mkpisi ma obu awl
Eva roba ọkpọ
Obere ihe maka icho mma
Usoro maka ịme Santa Claus ịchọ mma
Iji bido bekee okooko osisi na okirikiri site na iji kuki egbutu. Can nwere ike ime ka ha buru oke nke kacha amasị gị ma megharịa maka mkpa gị. Ọ bụrụ n’inweghị ndị na-egbutu kuki, ị ga-eji aka ya mee ya, ọ nweghị ihe o mere ma ọ zuo oke.
Ghichaa isi na mpempe ọcha, nke ga-abu Santa na ajị agba ya.
Na-etolite okpu anyị ga-achọ iberibe 3: akụkụ uhie, akụkụ ọcha na pamsị Ghichaa mpempe akwụkwọ na-acha ọcha na nke na-acha uhie uhie ma tinye pom pom n'ọnụ nke okpu.
Mgbe ah tukwasi ya n’isi-gi nke agwa anyị.
Ugbu a, ka anyị icho mma ihu. Izizi, mee okirikiri ka oghere ọkpọ wee dịrị imi, ewepụtụ afụ ọnụ ma kwadebe abụọ mobile anya.
Ghichaa anya na ihu, mgbe ahụ afụ ọnụ na n'ikpeazụ, imi.
Jiri eyeshadow ma ọ bụ ime ihie na swab owu iji nye ya agba na agba. Mgbe ahụ, jiri akara, mee nku anya.
Nku anya ọ ga-abụ ụzọ abụọ ihichapu ọkpọkọ ọcha.
Iji icho mma okpu m ga-eji a akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eva roba mpempe akwụkwọ na abụọ nke onwunwu iberibe, ị nwere ike ịhọrọ ihe ị nwere n'ụlọ.
Na cheeks na agba ọcha m ga-enye ya ụfọdụ ewute ntụpọ iji mkpisi.
Enwere m naanị mee oghere rue okpu ebe m na-aga tinye ọkpọkọ nhicha Ekwogharịrị ọlaọcha agba nke mere na ọ na-curled na otú a ga-adị mfe enịm ọ bụla dị ka osisi, ụzọ ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla nke ebe obibi gị.
Na voila, anyị agwụla ihe ịchọ mma Santa Claus anyị, echere m na ị masịrị ya. Hụ gị na echiche ọzọ. Ka ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ọrụ ụlọ » Fada ekeresimesi ka icho mma gị na osisi Christmas na eva roba
Aha njirimara ma ọ bụ mkpado maka onyinye Krismas
Otu esi eme ka osisi Krismas si na Fimo ma obu polymer polymer